ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »7အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်မိတ်ဆွေတို့ကိုအကြောင်းအမှန်တရားများ
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ပိုင်ဆိုင်အမှန်တကယ်ဘဝပြောင်းလဲဖြစ်ပါသည်. ထိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ချစ်သူများအားလုံးအတှကျထှကျရှိ, အကြှနျုပျတို့သညျကိုအမှနျတကယျအောက်ကခုနစျပါးအမှန်တရားတွေနှင့်အတူ resonate နိုငျကွောငျးကိုသိ.
အမှန်တရား #1: “အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အမြင့်”
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်များကိုပိုမိုမြင့်မား Self-လေးစားမှုအတွက်ရရှိလာတဲ့ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုပြီးယုံကြည်စိတ်ချကြသည်. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များခြွင်းချက်မရှိကိုချစ်, ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နှုတ်ဆက်, နှင့်လက်ခံမှု၏လိုအပ်မှုကိုဖြည့်ဆည်း, တစ်ဖန်တီးခြင်း “မြင့်မားသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်”, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်အဖြစ်ရာ, သငျသညျခံစားချက်ရိုက်နှက်မရနိုငျကွောငျးသိရ.
အမှန်တရား #2: ဘဝကပိုမိုအကောင်းမြင် Outlook နဲ့
သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအကြောင်းစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါ, သင်ကူညီပေမယ့်ပြုံးသူတို့သည်သင်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ဝမ်းမြောက်သောစိတ်ဆောင်ခဲ့ပြီရသောလူအပေါင်းတို့သည်နည်းလမ်းမစဉ်းစားနိုင်. ကြိမ်ခက်ခဲတဲ့များမှာတောင်မှအခါ,, အခြိနျနာရီကြာ cuddle နှင့်ကစားအစည်းအဝေးများသင့်တစ်နေ့တာတောက်ပစေတယ်. တကယ်တော့သင့်ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စဉ်းစားရသောအခါ, အဆိုး၏အကြံအစည်ကွာချော်နှင့်အပြုသဘောသင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လုံး radiates.
အမှန်တရား #3: အဘယ်သူမျှမပိုအထီးကျန်
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များလည်းပိုင်၏ခံစားချက်များကိုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုပေးကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိတည်ရှိပေး. ငါတို့မြင်နှင့်ခြွင်းချက်မရှိခံစားရတဲ့အခါအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ဆိုင်မှု၏လိုအပ်သောတာဝန်ယဇျပူဇျောကအားလုံးကိုထိုက်သည်, သူတို့ပေး nonjudgmental နှစ်သိမ့်.
အမှန်တရား #4: ဘဝနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဆီသို့ဖွင့်လှစ်
အဆိုပါ “မြင့်မားသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်” ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကျွန်တော်တို့ကိုအတော်လေးအဖြစ်ကြောက်စရာအားနည်းချက်မဖြစ်ခြင်းကိုပြသသော. ငါတို့သည်နောက်ကိစ္စအဘယျအဖြစ်ပျက်ကိုငါတို့သိကြ၏, အကြှနျုပျတို့အပျေါမှီခိုနေတဲ့လူနေမှုအရာလည်းမရှိ. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအားဖြင့်’ ဂရုစိုက်တတ်တဲ့သဘာဝနှင့်ချစ်ခင်, စစ်မှန်တဲ့မှီခိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ဖွင့်လှစ်အခါတိုင်းအန္တရာယ်ကိုအမှန်တကယ်တန်ဖိုးရှိကြောင်းမျှော်လင့်ချက်ကိုထောက်ပံ့ပေးပြသ.
အမှန်တရား #5: Soul Mate အတွက်ယုံကြည်ချက်
သူတို့မျက်စိထဲမှာကိုကွောကျရှံ့သောအကြည့်ရှုဖို့ရင်ခွင်-ထိုင်ဖို့ကျပန်းအနမ်းတဆင့်, ချွင်းချက်မရှိချစ်ခြင်းမေတ္တာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသည်အမိန့်တော်ကိုစိတ်ဝိညာဉ်ကိုအိမ်ထောင်ဖက်အားအသစ်သောအဓိပ္ပာယ်ကိုပေးသည်. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ချစ်သူများနှင့်နိူးများအတွက်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များငါတို့ဝိညာဉ်အိမ်ထောင်ဖက်၏တဝတည်းဖြစ်ကြ၏. သူတို့ကိုအားဖြင့် “ကိုယ့်ကို သိ.” ကြှနျုပျတို့လိုကျသောအခါအချို့သောအပိုအာရုံစိုက်မှုကိုသင်တို့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအသီးအသီးအခြားမှဟောပြောသောအတည်ပြု. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဝိညာဉျသအိမ်ထောင်ဖက်၏ဤအယူအဆကိုမှကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးပွင့်လင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာလုပ်သောဤအယူအဆသည်.
အမှန်တရား #6: စိတျလှုပျရှားမှုနှင့်အတူထိခုနှစ်တွင်
စိတ်ခံစားမှုအားဖြင့်, ကငိုသံခြောကျခြားဖွစျပွီးသို့မဟုတ်အဆက်မပြတ်စိတျအပွောငျးအလဲဆိုလိုပါဘူး. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကျွန်တော်တို့ကိုပျော့ပြောင်းပြီးနှင့်အတူထိတွေ့ရမှခွင့်ပြုသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတစ်ဦးပိုမိုနက်ရှိုင်းအဓိပ္ပါယ်ကိုပေး, ပိုပြီးရင်းနှီးတဲ့စိတ်ခံစားမှု. ကျွန်တော်တို့, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်များအဖြစ်, ပုံမှန်အားဖြင့်ပိုပြီးစိတ်အားထက်သန်နှင့်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်အဖြစ်ကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမှအခြားသူများအားမသာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံအစည်နှင့်ခံစားချက်တွေကိုဖော်ပြဖို့နိုင်ကြသည်.
အမှန်တရား #7: အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များပထမဦးစွာလာကြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များငါတို့သားသမီးများမှာ. အဆက်မပြတ်ကလေးအဖြစ်သူတို့ကိုကုသပေးဖို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရုပ်ပုံများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ချွေတာဖို့သူတို့ကိုအကြောင်းပြောနေတာကနေ, ကျွန်တော်တို့ကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအကြားဆက်ဆံရေးကလေးမိဘတစ်ဦး၏ရန်အလွန်ဆင်တူသည်.